कथावाचक साइग्रेस पोख्रेल : साधरण व्यक्तिलाई असाधरण माया- फिचर - कान्तिपुर समाचार
'कति सम्बन्धका कुरा छन्, कति विभेद र छुवाछुतका कथा छन् । कतै न कतै मेरो कथाका दर्शकहरुलाई कथाले केही न केही असर राख्छ भन्ने कुराले नै कथा सुनाउनु जिम्मेवारी बन्यो ।'
मंसिर २९, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — कलेजको पहिलो भेटमै साइग्रेसको ध्यान आफूतिर तान्छिन् वीरगन्जकी अनन्या । विस्तारै अनन्या र साइग्रेसको मित्रता प्रगाढ हुन्छ । त्यही मित्रताबीच कहिले प्रेमको टुसा पलाउन थाल्यो ? उनी दुईलाई पत्तो छैन । कलेजको दैनिक भेट, नोकियाको मोबाइलमार्फत सन्देश आदनप्रदान । औपचारिक प्रेम प्रस्ताव आवश्यक भएन, एकअर्कालाई मन पराउन ।
साइग्रेस अनन्या भेट्न घण्टौं बाइक चलाएर वीरगन्जसमेत पुग्छन् । एकदिन अनन्याले सुन्दर भविष्यका लागि क्यानडा जाने निधो गर्छिन् । त्यसपछि लामो दूरीको प्रेम इन्टरनेटमार्फत केही महिना त चल्छ तर उनीहरुको प्रेमकथा पूरा हुन पाउँदैन ।
यही अधुरो प्रेमकथा कोरेर साइग्रेसले आफ्नो युट्युवब च्यानलमा अडियो उपन्यास वाचन गरेका छन् । एक घण्टा ४६ मिनेट लामो 'मेरो अधुरो प्रेम' शीर्षकको यो अडियो नै साइग्रेसको स्टोरी टेलिङ(कथा वाचन)को टर्निङ पोइन्ट बन्यो ।
त्यतिबेलासम्म साइग्रेसको युट्युब च्यानलमा १२/१३ हजार सब्सक्राइबर थियो । यो कथाले एक लाख सब्सक्राइबर बढाइदियो । उनका स्टोरी टेलिङका भिडियोहरुमध्ये सबैभन्दा बढी हेरिएको कथामा पर्छ,'मेरो अधुरो प्रेम ।' अडियोलाई ३८ लाख बढीले सुनेका छन् । साइग्रेस यो कथाको पुस्तक पनि निकाल्दैछन् । यही कथामार्फत आफ्नो स्वर अनि स्टोरी टेलिङको प्रशंसक कमाए ।
स्टोरी टेलिङमा छुट्टै पहिचान बनाएका साइग्रेस पोख्रेलले कथा सुनाउन कहिले रोजे त ? जवाफका लागि उनको बाल्यकाल फर्किनुपर्छ । 'लाटो बुङ्गो' र 'बित्ते', बुवा सँधै यी दुई कथा दोहोर्‍याएर साइग्रेस र उनका भाइलाई सुनाउँथे । ४/५ उमेरमै बुवाले सुनाउने ती कथा सुन्दै हुर्के साइग्रेस । जतिपटक कथा सुने पनि उस्तै रस पाउँथे । दोहोर्‍याइ, तेहर्‍याइ सुने पनि रोचक अनि रमाइलो लाग्थ्यो कथा सुन्न । बुवाले कथा सुनाउन थालेसँगै कथाका पात्र, परिवेश आँखा अगाडि नाच्न थाल्थ्यो । बुवाको त्यही कथा वाचनबाट प्रभावित भए साइग्रेस । कक्षामा ४ मा पढ्दै गर्दा विद्यालयमा आयोजित कमेडी च्याम्पियन प्रतियोगितामा हास्य कथा सुनाएर विजेतासमेत बने ।
बिस्तारै उनले कथा कोर्ने, डकुमेन्ट्रीमा आवाज दिन थाले । तर त्यतिबेला उनको कथाले साइग्रेसलाई चिनाउन सकेन । सन् २०१२ मा उनले पोखराबाट स्टोरी टेलिङ व्यावसायिक रुपमा सुरु गरे । त्यतिबेला सत्यसाई संगठन नेपालले आयोजना गरेको युथ कन्फ्रेन्समा उनले कथा सुनाए । धेरैले उनको आवाजको तारिफ पनि गरे । त्यसयता कथा वाचन गर्दै युट्युबमा अपलोड गर्न साइग्रेस हौसिए । त्यतिबेला यही विधामा करिअर बनाउँछु भन्ने सोचेका थिएनन् । तर अहिले आफूलाई स्टोरी टेलिङमै उनले व्यस्त बनाएका छन् । 'व्यक्तिलाई कुनै काममा मिहिनेत गरेको अनुभव लाग्दैन । तब त्यो व्यक्तिलाई महसुस हुन्छ कि यो काममा म राम्रो छु की जस्तो । मलाई सँधै कथा सुनाउँदा र बोल्दाखेरी सहज महसुस हुन्थ्यो,'उनले सुनाए ।
२०६५ तिर उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जागिरे थिए । अस्थायी दरबन्दी थियो । काम सजिलो थियो । तर सिकाइको हुटहुटीले डेनमार्क पुर्‍यायो । 'योभन्दा बढी के त भन्ने हुटीहुटीले नै मलाई डेनमार्क पुर्‍यायो । दक्षिण एसियाको युवाका लागि थोरै रहर र बाध्यता हुँदो रहेछ - विदेश । केही पढौं सिकौं भनेर नै म विदेश गएको हुँ,' साइग्रेसले भने, 'म त्यो चरा हुँ जो आफ्नो परिवारको लागि आहार खोज्नलाई बाहिर गएको छ । पछि फर्केर त यहीँ गुँडमा आउनुपर्छ । त्यहाँ सिकेर आएको ज्ञान यहाँ आएर देखाउनुछ ।'
पन्ध्र हजार कथा
साइग्रेस आफूसँग अहिले १५/१६ हजार कथाहरु रहेको दाबी गर्छन् । 'अहिले १५/१६ हजार कथाहरु छन् । एकदम गाह्रो हुन्छ रोज्न । लेखाइको ढाचा नमिलेको कथाहरुलाई परिमार्जित गरेर सुनाउँछु,' उनले सुनाए । उनी सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कथाहरु सुनाउने गर्छन् । चाहे त्यो प्रेमकथा हुन् या सामाजिक विषयवस्तुका कथा । उनी मानवीय मूल्यमान्यतामा आधारित कथा नै सुनाउन रुचाउँछन् । 'अधुरो प्रेम, नौलो सुरुवात प्रेमकथा हुन् तर त्यसमा मानवीय मूल्य छन् । मेरो आवाजले भन्दा पनि मैले प्रस्तुत गरेका कथाका विषयवस्तुले गर्दा दर्शकले मलाई मन पराइदिनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ । कथामा एउटा शिक्षा हुन्छ त्यसकै कारण पनि मनपराइदिनु भएको जस्तो लाग्छ,' उनले दंग पर्दै सुनाए ।
तस्बिर/भिडियो : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर
उनी कहाँ सत्य घटनादेखि काल्पनिक कथाहरु ठोक्किन आइपुग्छन् । सत्य घटनामा आधारित कथामा पात्रको गोपनीयता र परिवेशलाई उनी परिवर्तनसमेत गरिदिन्छन् । कतिले नाम परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्दै कथाहरु पठाउँछन् । आफूले सनाएका कथाले कतै न कतै समाजमा प्रभाव छोड्ने भएकै कारण कथा सुनाउनु जिम्मेवारी बनेको साइग्रेस बताउँछन् । 'कति सम्बन्धका कुरा छन्, कति विभेद र छुवाछुतका कथा छन् । कतै न कतै मेरो कथाका दर्शकहरुलाई कथाले केही न केही असर राख्छ भन्ने कुराले नै कथा सुनाउनु जिम्मेवारी बन्यो । आत्महत्या गर्न लागेको व्यक्तिले समेत मेरो कथाहरुले आत्मबल बढाएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन्छन् ।'
'सिन्दुरबिनाकी दुलही'मा एक सडक बालिकाले आफ्नो जीवनको कालखण्डमा गर्ने संघर्षको कथा समेटिएको छ । 'नौलो सुरुवात'ले सहजै करिअर रोज्न प्रेरित गर्छ । 'अधुरोले प्रेम'ले जीवनको समाप्ति छिटै गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ ।
कतिपय समय झट्ट सुन्दा विश्वास गर्नै नसकिने कथाहरु साइग्रेसकहाँ आइपुग्छन् । तर ती कथाहरु छनौट गर्ने क्रममा उनी एउटै कुरा मनमा दोहोर्‍याउँछन्,' जबसम्म कथालाई जीउन सक्दिनँ । शब्दहरुलाई पानीसरि पिउन सक्दिन म कथा भन्नै सक्दिनँ ।' उनी कथाहरु आउनेबित्तिकै वाचन गरिहाल्दैनन् । सुरुमा त कुन धरातलमा टेकेर हेर्दा कथालाई न्याय दिन सक्छु भन्नेतर्फ नै उनको ध्यान जान्छ । त्यसपछि बल्ल पात्र बनेर कथा सुनाउँछन् । सिन्दुरबिनाको दुलहीमा प्रगति पात्र उनी आफै बनेका छन् ।
पछिल्लो समय उनले लेखेका उपन्यासमाथि फिल्म बनाउने अफर आएको थियो । तर, कृतिले पाएको माया फिल्म बनिसकेपछि ह्रास आउने डरले उनले अनुमति दिएनन् । 'मलाई डर लाग्छ, मैले जुन दृष्टिकोणले कथाको पात्रहरु कोरेको छु । त्यही अनुसार पर्दामा नदेखिन सक्छ । त्यसैले मेरो कृतिले पाएको माया फिल्ममा बनेपछि ह्रास आउने हो कि भनेर डर लाग्छ । त्यही भएर मैले दिइनँ । समय पनि भइसकेको छैन फिल्म बनाउने भन्ने लाग्थ्यो,'उनले भने,'तर म आफैलाई मेरो कृतिमाथि फिल्म बनाउने मन छ ।'
'म सेलेब्रिटी होइन'
साइग्रेस अहिले 'वर्ड टुर'मा छन् अर्थात शब्दहरुको भ्रमण । विभिन्न सहरमा पुगेर दर्शकसँग साक्षात्कार गर्ने कार्यक्रम लिएर उनी नेपाल आएका हुन् । यो भ्रमणमा फरक उमेर समूहका दर्शकहरुसँग उनको भेट भयो । धरानमा एकजना क्यान्सर पीडित आमासँग भेटे । अप्रेसनपछिको समयमा आमाले धेरै उनकै कथा सुनेरै दिन बिताएको कुरा सुनाइसकेपछि उनी भावविह्रल भए । 'धेरैले मेरो केटी फ्यान धेरै छन् भन्ने आरोप लगाउनुहुन्थ्यो । तर मैले यो टुरमा फरक-फरक दर्शकहरु भेटें,'उनले भने,' दृष्टिविहीन साथीहरू पनि लगातार २ सोमा आउनु भयो । पुरुष फ्यानहरु पनि रुनुभयो । असाधरण माया देखाउनुभयो, साधरण व्यक्तिलाई भन्ने लाग्यो ।'
चितवनको शोमा ८ सय जना हुन्छन् भन्ने अनुमान गरिएको थियो । कार्यक्रम गर्ने ठाउँमा मात्र एक हजार अट्ने देखिन्थ्यो। तर त्यहाँ २ हजारभन्दा बढी मानिस ओर्लिएको देख्दा साइग्रेसले दंग परे । 'सुरक्षागार्डले स्टेजको पछाडिबाट प्रवेश गराउने सोच्नुभयो । तर त्यतिबेला मलाई लाग्यो । म कुनै स्टार होइन, सेलेब्रिटी होइन । साधरण स्टोरी टेलर हुँ । जसलाई उहाँहरुले माया गरेर एकपटक नजिकबाट हेर्न अथवा छुन खोज्नु भएको हो । यदि म सेलेब्रिटी भएर पछाडिबाट स्टेजमा गएर हात हल्लाएर जान्छु भने म जमिनको मान्छे जमीनमा रहन्न जस्तो लाग्यो । त्यसैले मैले दर्शकबीच बाटै स्टेज उक्लने सोचें,'उनी सुनाउँछन्,'त्यतिबेला हिँड्नै परेन । त्यो देख्दा मानिस सागर ओर्लेर आएझैं लाग्यो । म कुन संसारमा छु भन्ने लाग्यो । यसअघि त दर्शकलाई भर्चुअली भेट्दै आएको । उहाँहरुसँगको मायाको वर्णन गर्न सक्दिनँ ।'
यसरी दर्शकबाट घेरिँदा त सेलेब्रिटी अनुभव पक्कै गर्नुभयो होला ? भन्ने प्रश्न खस्न नपाउँदै उनले जवाफमा भने,'अनुभव गरिनँ । पहिलादेखि नै म यो कुरामा तथष्ट थिएँ । मलाई उहाँहरुले सेलिब्रिटी खोज्नु भएकै होइन । म त्यस्तो बन्नु पनि हुँदैन । र मलाई त्यो अनुभव पनि छैन । मलाई त हाम्रो दर्शकले कथा भनिदिने, हाम्रो शब्द बोलिदिने आफ्नै परिवारको एक सदस्य भेटेको बेलामा खुसी व्यक्त गर्नु भएको त हो । म त्यसमै रमाउँछु ।'
प्रकाशित : मंसिर २९, २०७८ १३:२५
फिल्म फेस्टिभल : प्लेटफर्म छ, बजार छैन
मंसिर २७, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — सगरमाथासहित विश्वका ८ हजार मिटर अग्ला १४ हिमचुचुरा ७ महिनाभित्र आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेका निर्मल पुर्जामाथि बनेको डकुमेन्ट्री 'फोर्टिन पिक्स : नथिङ इज इम्पोसिबल' नेटफ्लिक्समा प्रदर्शनमा आएसँगै विश्वले नेपाली आरोहीको साहस, उर्जा र महत्वकांक्षाको खुलेरै तारिफ गरेका छन् ।
विदेशी आरोहीले आरोहण गर्न ८ वर्ष लगाएको रेकर्डलाई ७ महिनामै तोडिदिएपछि यतिखेर निर्मलसँगै हिमालको कथा, आरोहीहरुका दुःख र साहस विश्वसामु चर्चाको विषय बनेको छ । ३१ भाषामा प्रदर्शनमा आएको डकुमेन्ट्री विश्वमा नेपाल र नेपालको पर्यटनलाई चिनाउने माध्यमसमेत बन्दैछ ।
विश्वका ८ हजार मिटर अग्ला पर्वत नेपालमै पर्छन् । पर्वतहरुको कथा समेट्ने फेस्टिभलको आवश्यकता महसुस गरेर हिमाल एसोसियसनले २ दशकदेखि काठमाडौं इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) आयोजना गर्दै आइरहेको छ । किम्फ लामो समयदेखि टिक्न सफल फेस्टिभलमध्ये पर्छ । पर्वतसँग जोडिएका विभिन्न आयामहरुको कथा देखाउने फेस्टिभल यो वर्ष ९ डिसेम्बदेखि सुरु भएको किम्फ आज सकिँदैछ । १९ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा किम्फको प्लेटफर्मले कति फिल्मकर्मी जन्मायो त ? हामीकहाँ यो दुइ दशकमा पर्वतकै कथा भन्ने निर्देशक/विज्ञ/जनशक्तिको निर्माण हुन सक्यो त?
युरोपेली देशहरुले पर्वतलाई फिल्मकै विधाको रुपमा विकास गरिसक्यो । सर्वोच्च शिखर भएको देशमा भने अझै 'माउन्टेन फिल्म' फिल्मको विधाको रुपमा विकास हुन सकेको छैन । निर्मल पुर्जाको 'फोर्टिन पिक्स : नथिङ इज इम्पोसिबल'को कथा सुनाउन पनि हामीलाई किन विदेशी फिल्ममेकर नै चाहियो? किम्फले १९ औं संस्करणको खुसीयाली मनाइरहँदा यी प्रश्नहरुमाथि पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ।
निर्देशक नवीन सुब्बा यो विधामा नेपालले आफ्नो परिचय निर्माण गरिसक्नुपर्ने धारणा राख्छन् । 'सबै फिल्ममेकरले पर्वतको फिल्म बनाउन सकेनन् होला । तर अहिलेसम्म माउन्टेन फिल्मको विज्ञ जन्माउन सक्नुपर्थ्यो । माउन्टेनर्सहरुलाई नै फिल्ममेकर बनाउन पनि सकिन्थ्यो नि त । उनीहरुलाई प्रभावित गर्न सकिन्थ्यो । त्यो प्रकारको प्लेटफर्महरु फेस्टिभलले आयोजना गर्न सकिन्थ्यो । तर यहाँ त्यस्तो भएन,' निर्देशक सुब्बा भन्छन् ।
नयाँ फिल्ममेकरको गुणात्मक वृद्धि गर्ने प्लेटफर्म हो फेस्टिभल । विश्वप्रख्यात कान्स, भेनिस, लोकार्नो, बुसान फेस्टिभलले नयाँ फिल्ममेकरलाई बजारसँग जोडिदिन्छन् । कामै नसकिएको(आधा) प्रोजेक्ट त्यहाँ प्रदर्शनमा राखिरहेको हुन्छ । संसारभरका लगानीकर्ता ल्याएर उनीहरुका प्रोजेक्टहरुसँग छलफल गराइदिन्छन् । तर नेपालका फेस्टिभल नयाँ फिल्ममेकरलाई बजारसँग जोड्न चुकेका छन् ।
फिल्म फेस्टिभलले वर्षभरी बनेका उत्कृष्ट फिल्महरुको प्रदर्शन मात्र होइन, नयाँ निर्देशकलाई प्लेटफर्म दिने र हुर्काउनेसमेत गर्छ । फेस्टिभलका ल्याबले नयाँ फिल्मकर्मीलाई फिल्म मेकिङको तालिम दिन्छन् । तर नेपालमा त्यस्तो कार्य प्रभावकारी नभएको निर्देशक दीपेन्द्र लामा बताउँछन् । 'यहाँका फिल्म फेस्टिभलले फिल्ममेकरलाई फलो–अप गर्दैन । यदि फिल्म फेस्टिभलको उदेश्य फिल्म उद्योगलाई माथि लाने छ हरेक फिल्मकर्मीलाई समात्न सक्नु पर्‍यो । उनीहरु आफैं खोज्छन् फिल्मकर्मीको कामलाई,' लामाले भने, 'तर हाम्रो फिल्म फेस्टिभललाई फिल्ममेकर कसले के काम गर्छ थाहै हुँदैन। अर्को त लघु फिल्म, डकुमेन्ट्री बनाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने उपहार रकमसमेत प्रयाप्त हुँदैन ।'
फिल्म फेस्टिभल छलफल, विचार, विमर्शको थलो हो । फेस्टिभलको बहसले समाज रुपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । फेस्टिभलले फिल्मको भाषा निर्माण गरिरहेको हुन्छ । सन् १९८० तिर यौनिक तथा अल्पसंख्यकका विषयलाई निकै नकारात्मक रुपमा लिइन्थ्यो । तर यस्तै प्लेटफर्महरुले त्यो विषयलाई बहसमा ल्याइदियो । तर हामीकहाँ उही पूरानै विषयहरुमा अन्तक्रियात्मक कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन् ।
किम्फ प्रतिनिधि फेस्टिभल हो । निरन्तर आयोजना भइरहेका नेपाल मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)लगायत फाट्टफुट्ट भइरहने फेस्टिभलहरुको हालत उस्तै छ । विभिन्न विधा समातेर आयोजना भइरहेका फिल्म फेस्टिभलहरुले आफ्नो विधामा बनेका राम्रा फिल्मसमेत देखाउन सकिरहेका छैनन् । विधा अनुरुपको सम्बन्धित राम्रा निर्देशकहरुसमेत ल्याउन सक्दैनन् । भर्चुअली आयोजना भएका फेस्टिभल त कहिले हुन्छन् अत्तोपत्तो हुँदैन । हालै मानवअधिकार फिल्म फेस्टिभल, अस्कर फिल्म फेस्टिभल आयोजना भए, तर ती फेस्टिभल कहिले भए कुनै अत्तोपत्तो भएन ।
फेस्टिभलहरु जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने त्यो रुपमा विकास हुन नसकेको बताउँछन् निर्देशक नवीन सुब्बा । 'फिल्म फेस्टिभल भइरहेका छन् । तर नेपाली फिल्म फेस्टिभलहरु जसरी विकास हुनुपर्ने त्यसरी भइरहेको छैन । विश्व फिल्म र नेपाली फिल्ममा पुर्‍याउनुपर्ने योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । बजेटको सिमितता हुनुपर्छ । सरकारको नीतिगत उदेश्य नभएर पनि हुन सक्छ । अर्को त आयोजकहरुको भिजन नभएर हुन सक्छ,' निर्देशक सुब्बाले भने, 'अहिले १० औं, १५ औं वर्षमा फेस्टिभलहरु भइरहेका छन् । तर एउटा वर्षमा भएको कुरा नै अर्को वर्षमा दोहोरिरहेको छ । विदेशतिरका फेस्टिभलमा विकास देखिन्छ ।'
आयोजकहरु फेस्टिभलको विकास र त्यसले फिल्म उद्योगमा पार्ने असरको विषयमा गम्भिर नहुँदा पनि फेस्टिभलको विकास नभएको हो । नेपालमा त फेस्टिभलहरुमा मुलधारे फिल्म र वैकल्पिक फिल्महरु छुट्टिएको देखिन्छ । विधागत रुपमा आयोजना भइरहेका फेस्टिभलले मुलधारे फिल्मलाई खासै समेट्न सकेको छैन । त्यसैले वैकल्पिक फिल्मका फेस्टिभलमा राजेश हमाल, प्रदीप खड्का, अनमोल केसी, स्वस्तिमा खड्का, केकी अधिकारीलगायतका कलाकारको अनुहार देखिँदैन ।
बुसानको नेसनल प्यानारोमामा त्यहाँका स्टारहरु पुगिरहेका हुन्छन् । कलकोत्ता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा सारुख खान गइरहेका हुन्छन् । तर नेपालका कलाकार त अन्तरक्रियाकै लागि बोलाउँदा पनि नाफा नोक्सानी हेर्छन ।
'फेस्टिभलमा त उनीहरु चिनिन पाउँछन् । उनीहरुले संसारको फिल्म, अभिनय बुझ्न पाउँछन् । हाम्रोमा त हामी अलग्गै हुँ भन्ने भावना छ । त्यहाँ अन्तरक्रिया गरिन्छ । फिल्मको कलात्मकता विषयबारे छलफल हुन्छ,' सुब्बा सुनाउँछन्, 'व्यवसायिक फिल्म कलात्मक हुनुहुँदैन, व्यवसायिक फिल्मको अभिनयमा निखार आउनु हुँदैन, ती फिल्महरुको प्राविधिक विकास हुनुहुँदैन भन्ने हुँदैन नि । तर हामीकहाँ समस्या छ । सायद त्यो हाम्रो इन्डस्ट्रीको अल्पज्ञान र सिमितता होला ।'
निर्देशक मनोज पण्डित मुलधारे फिल्मलाई समेट्ने छुट्टै फेस्टिभलको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । विषयगत हिसाबले महिला, बालबालिका, एनिमेसनलगायतका विविधतामाथि नेपालमा फेस्टिभल हुन सकिरहेको छैन । भइरहेका फेस्टिभल पनि काठमाडौं क्रेन्द्रित छन् । फिल्म सँस्कृतिको विकास गर्न हरेक शहरमा फेस्टिभल हुनुपर्ने धारणा राख्छन् निर्देशक लामा । पोखरामै पनि पोखरा र पामे फेस्टिभल हुने गर्छ तर ती फेस्टिभल पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
निर्देशक सुब्बा भने नेपालका फेस्टिभल नाङ्लो पसलजस्तै भएको धारणा राख्छन् । भइरहेको फेस्टिभललाई ठूला बनाउने, मिलेर अगाडि बढ्नेतर्फ नसोचेको पनि उनको भनाई छ । फेस्टिभलहरुको एउटा संगठन बनाइ सरकारसँग नीति निर्माणका लागि एउटै आवाज बनेर अगाडि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
स्तर कसरी सुधार्ने ?
फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्न प्रमुख त आर्थिक अभाव नै ठूलो चुनौति हो । आर्थिक स्रोतकै कमीले च्याउसरी मौलाएका फिल्म फेस्टिभल टिक्न सकेनन् । आदीवासी जनजाति फिल्म फेस्टिभल, एकादेशमालगायतका फेस्टिभल त बीचमै हराए । फेस्टिभलको स्तर उकास्न आर्थिक स्रोत नै आवश्यक रहेको किम्फका निर्देशक वसन्त थापा बताउँछन् ।
'हामीले किम्फबाट धन उपार्जन गर्ने उदेश्य कहिल्यै पनि राखेनौं । कुनै प्रकारले यो आयोजना गर्न खर्च जुटाइरहेका छौं । अहिले कति भाइबहिनीहरु किम्फमा स्वयसेवकको रुपमा जोडिएका छन् । स्रोत भएको भए त्यही स्तरको फेस्टभिल गर्न सक्छौं । त्यो संभावना छ र त्यसको सामर्थ्य पनि हामीसँग छ,' थापाले भने, 'तर यही आर्थिक स्रोतसाधनकै कारणले सोचेजस्तो तरिकाले फेस्टिभल गर्न सकिरहेका छैनौं । यो नै ठूलो चुनौति हो फेस्टिभल गर्नेहरुको । हरेक पटक फेस्टिभल गर्दा सुन्यबाट सुरु गर्नुपर्छ । आर्थिक आधार भएको भए पाँच वर्षको योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो ।'
फेस्टिभलबारे नीति नियम बनाउन नसक्दा यस्तो अप्ठ्यारोमा फेस्टिभल गर्नुपरेको थापा सुनाउँछन् । 'सायद हामीले सम्बन्धित निकायलाई सम्झाउन सकेनौं होला । हाम्रो चाहना त उहाँहरुले नै बुझ्नुपर्ने भन्ने थियो । चलचित्र विकास बोर्ड आफै फेस्टिभल गर्दैन । विकास बोर्डले त गर्नेहरुलाई त नीति नियम बनाएर सहयोग गर्न सक्थ्यो,'थापाले भने,'हामीलाई त यो फेस्टिभल भारी भएको छ । कहाँ बिसाउँ भाको छ । हामी पनि थाक्यौं नि। त्यस्तो वातावरण सिर्जना हुन सकेन । सँधै आर्थिक कुराको लागि धाउनु पर्ने । बलिउडकै एउटा सेलिब्रिटी ल्याउन सकिएको भए छुट्टै प्रचार हुन्थ्यो । त्यसको लागि स्रोत चाहियो ।'
धेरै देशमा फेस्टिभल सरकारको लगानीमा आयोजना हुन्छन् । छिमेकी देश भारतमै संचारमन्त्रालय अन्तर्गत फेस्टिभल डिरेक्टोरेटले फेस्टिभलमा सहयोग पुर्‍याउने, बजेट दिने काम गर्छ । फ्रान्समा पनि सिएन्सी छ, जुन फ्रान्स सरकारकै अंगको रुपमा रहेको छ । तर हामीकहाँ फिल्म क्षेत्रको अभिभावक मानिने चलचित्र विकास बोर्डले समेत फेस्टिभल गर्दैन । यस्तोमा नगरपालिका, महानगरपालिका, स्थानिय र प्रदेश सरकारको ध्यान फेस्टिभल गर्नतर्फ किन जान्थ्यो ।
मानव अधिकार फिल्म फेस्टिभलका अध्यक्ष अरुण दियो जोशी फेस्टिभलका लागि सरकारले लगानी नगर्दा विभिन्न दाताहरुसँग हात फैलाउनुपरेको गुनासो पोख्छन् । 'आम्दानीको स्रोत अर्कै बनाएर फेस्टिभिलमा पार्ट टाइम काम गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा चाहिने समय दिन सक्दैनौं । ९ भइसक्यो । तर हाम्रो फेस्टिभलको लागि आजसम्म लगातार एउटै स्रोत लगातार पाउन सकिरहेका छैनौं । चलचित्र विकास बोर्डले पनि फेस्टिसभलाई सहयोग गर्ने नीति छैन । फेस्टिभलमा सरकारी स्वामित्व हुँदैन,' उनले भने ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलका अध्यक्ष केपी पाठकको मत अरुणको भन्दा फरक छैन ।
'फेस्टिभलको महत्वपुर्ण कुरा नै फिल्म बजार हो। जहाँ फिल्मको किनबेच हुन्छ । त्यो बजार भएपछि मात्र संसारका फिल्मको ध्यान आकर्षित हुन्थ्यो । हामी सरकारलाई ५/१० लाख माग्न नै हारगुहार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो समग्र बजेट नै ६०/७० लाख हुन्छ । यति लगानीमा कसरी ठूल–ठूला फेस्टिभल जस्तै विकास हुन सक्छौं । कम्तिमा सरकारले बजेट छुट्याइदियो भने वृद्धि हुन्थ्यो । फेस्टिभलको विकास हुनलाई खर्च चाहिन्छ । त्यो नै नभएपछि कसरी हुन्छ,' पाठकले भने, 'आर्थिक स्रोत नभएपछि गतिला फिल्मकर्मी, वितरक ल्याउन पनि सकिँदैन । फिल्म मार्केट र ल्याब भए मात्र फिल्ममेकर आकर्षित हुने हो । अहिले त सहभागी फिल्ममेकर मात्रै आउँछन् । जबसम्म अन्य फिल्मकर्मी आउँदैन, बिक्रेताहरु आउँदैन, प्रोडक्सन कम्पनी आउँदैन कसरी वृद्धि हुन्छ ।'
नेपाल सरकारले नै नीतिगत रुपले फेस्टिभललाई समेट्नुपर्ने निर्देशक सुब्बाको भनाई छ । भन्छन्,'हाम्रो सरकार त बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । हाम्रोमा फिल्म सम्बन्धि संस्थाहरु कमी भए । फिल्म सम्बन्धि सरकारी संस्थामा एउटा विकास बोर्ड मात्र छ । बोर्डले मात्र हुँदैन । तर फेस्टिभल डिरेक्टोरेक्ट अथवा बालबालिकाको फिल्म बनाउने अलग्गै अंग सरकारले सुरु गर्न सक्छ ।’
प्रकाशित : मंसिर २७, २०७८ १०:२१
गीतसंगीतको निरन्तर चोरी
सम्पादकीय माघ ९, २०७८
संगीतज्ञ अम्बर गुरुङले उहिल्यै ‘सुनको तारा खसाउने गीत’ र ‘अन्तर्वार्ता र अनुभव’ लेखमार्फत गीतसंगीत चोरीबाट आफू आजित भएको दुखेसो पोखेका थिए ।
लोकतन्त्र, निर्वाचन र सरकार
रमेश लेखक माघ ९, २०७८
लोकतन्त्र जनताको शासन हो । जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत शासन गर्छन् । जनताले निश्चित अवधिमा दलहरूको मूल्यांकन गरी जनादेश दिने गर्छन् ।
दुर्व्यसनीहरूको कुदृष्टि विद्यालयतिर !
साधना प्रतीक्षा माघ ९, २०७८
विद्यालयनजिकैको झाडीमा केही किशोर बसिरहेका थिए । उनीहरूको व्यग्रताले बताइरहेको थियो, कसैको पर्खाइमा छन् । केही बेरमा विद्यालयतिरबाट सोही उमेरको किशोर आएर हतारहतार त्यस समूहमा मिसियो । आपसमा...
२० वर्षे कृषि विकास रणनीति
कृष्णप्रसाद पौडेल माघ ९, २०७८
झन्डै ७ वर्षपहिले एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा नेपालका सबै ठूला दातृ समूहसम्बद्ध परामर्शदाताहरूले प्रत्यक्ष २० लाख अमेरिकी डलर र अप्रत्यक्ष रूपमा थप दसौं करोड रुपैयाँ...